Production ngwaọrụ ogbako - Yuyao Jera Line Dabara Adaba Co., Ltd.
Anyị Jera eriri nwere anyị ebu imewe, ebu Ndinam na ebu nhazi ogbako.
Nkedo bụ ngọngọ na-ejupụta nke jupụtara na mmiri mmiri ma ọ bụ ngwa ngwa dị ka plastik, iko, ọla ma ọ bụ akụrụngwa seramiiki. A ebu bụ ibe ya na nkedo. Dị ka a emeputa, ọ bụ adaba nwere onwe ha ịkpụzi omumuihe, ka idozi na-ezukọta ígwè Ebu ngwa ngwa na mgbe ahụ na-enyere mmepụta edoghi rụọ ọrụ nke ọma.
Na ịkpụzi ogbako, anyị na-emekarị-ebu akụkụ maka ngwaahịa:
-Plastic ebu agbara ndi mmadu na ngwaahịa
-Pịa akpụ ngwaahịa
-Aluminium anwụ mgbatị ngwaahịa
-Zinc anwụ mgbatị ngwaahịa
-Helical waya kpụrụ grips
Site na ogbako a nke nkedo, jera nwere ike ichoputa ma mepee ihe ohuru ma obu meputa udiri ahia nke ugbu a dika ihe ndi ahia choro. Na anyị factory nwere ike ịbụ ihe asọmpi, na-enwe ike inye anyị ahịa asọmpi price na elu àgwà ngwaahịa.
Ebumnuche anyị bụ rụpụta ma nyefee ndị ahịa anyị ngwaahịa zuru ezu na nke a pụrụ ịdabere na ya na nwube nke netwọkụ mgbasa ozi na sistemụ ike. Anyị na-arụpụta ndị ahịa anyị ngwaahịa niile metụtara ya na iwu nke netwọkụ nkwukọrịta na sistemụ nkesa ike. Ọ bụrụ n’inwe ngwaahịa ndị metụtara ya, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ma ọ bụ kpọọ anyị.